अन्ततःभोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने,लकडाउनको घोषणा ! – AB Sansar
कोरोना विशेष सूचना प्रविधि
March 26, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on अन्ततःभोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने,लकडाउनको घोषणा !
अन्ततःभोलिदेखि पसल/व्यवसाय बन्द, सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने,लकडाउनको घोषणा ! काठमाडौं । भोलिदेखि फेरि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले असोज ९ गते रातीदेखि १४ गते रातीसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि नगरपा लिकाले लकडाउनको घोषणा गरेको हो ।बारबर्दिया नगरपालिकाको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन अवधीभर सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, पसल व्यवसाय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, शैक्षिक संस्थाहरु र यातायात लगायतका क्षेत्र पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***